Isixhasi se-Decoiler straightener yezinto ezinokungqinelana China Manufacturer
Inkcazo:Imigca yeCoil ekhombayo,Umgca wokuGqibelela kweCoil,Ii-Decoilers Straightener Pneumatic Feeder
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Isixhasi se-Decoiler straightener yezinto ezinokungqinelana
Isixhasi se-Decoiler straightener yezinto ezinokungqinelana
Deco ILER feeder mac Hine FOR IZINTO TEN nokuci- Ophezulu
Isixhasi se-Decoiler ngqoener feeder ye-tension ye- space tension design idibanisa i-feeder / i -enerator kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa ne-loops eqhelekileyo yeslayidi. Sinikezela ngeempawu ezininzi ezinokukhethwa ukuze zilungele iimfuno ezithile zesicelo, kubandakanywa ii-peelers, ukubamba iingalo, okanye ukuhlangulwa komqhubi. Le nkqubo yenzelwe iitreythi ezingama-0.6-6.0mm ubukhulu kunye nezixhobo ezinamandla ezomeleleyo ezifuna ukuqhutywa kwisimo esichanekileyo. Ngokuqulunqa loop ngezantsi kwesiporho kunye nokufaka feeder kunye ngqo, indawo ebalulekileyo emgangathweni igcinwe. Ukukhutshwa kweenqwelomoya zokondliwa kokubini kunye nokuqengqeleka ngqo, kuya kwenza uyilo olululo kwizicelo zokufa eziqhubayo.
Isixhasi sesidibanisi sokudubula esifanelekileyo sodidi lwezinto ezinobunzima obuphezulu luqonda iirejistri zomgangatho zokuphelisa isaphetha kunye neendlela zokumiswa komgangatho othe tye kunye nokuchaneka kokuqondisa ngokuthe ngqo kwimiqolo yokulungisa imo yokukhanya. Owona mgangatho uphezulu wokusebenza ubanzi, ngokuxhomekeka kuhlobo lwe-strighener, umalunga ne-1800 mm.
Amacandelo aphambili aneenkcukacha zeDoiler ngqoener feeder yento enobunzima obuphezulu njengezantsi:
Isincedisi se-Mac4 se-decoiler straightener sezinto zempixano ephezulu sisebenza kumzi mveliso wabathengi bethu.
Isixhasi se-decoiler ngqoener feed yezinto zodandatheko oluphezulu f okanye yenza umgca wokutya wephepha lomqolo.
Lo matshini usebenza kumzi-mveliso omnye wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo lwe-U kunye neDoiler straightener feeder yezinto zodibaniso oluphezulu.
Imigca yeCoil ekhombayo Umgca wokuGqibelela kweCoil Ii-Decoilers Straightener Pneumatic Feeder Imigca ye-Coil epheleleyo Imigca yokupheka Imigca yokuLungisa iikhoyili Imigca yokuDla ngokutya Imigca yokuCoca ngokuXineneyo